Chokoreti uye amaretto mousse - Thermomix Mapoka | ThermoRecipes
Chokoreti uye amaretto mousse
Kudya75 maminitsi5 vanhu
kubudikidza Mayra Fernandez Joglar
Iyi ndiyo imwe nzira yandinodaidza kuti "yekutanga". Vari nyore, nekukurumidza uye mhedzisiro yekuti zvirokwazvo unozopedzisira uchipa iyo yako yega kubata.
Inongova ne5 zvinhu; kirimu, chokoreti, shuga, mazai uye amaretto iyo, isingasviki maminetsi gumi nemashanu uye nekuda kweThermomix yedu, inova akapfava uye akapfava mousse… Ndiani asina maminitsi gumi nemashanu kusvika shamisa mhuri?
Kana uine vana vakura, tora mukana wekuzviita ivo pachavo uye kuita semashefu chaiwo.
Doro rinosarudzika, rinogona kubviswa kana kutsiviwa neimwe seyekuti, semuenzaniso, whiskey, kirsch kana Cointreau ... kune mumwe nemumwe aine zvavanofarira. Ndakatendamira kune a macaroon nekuti ine hanyanisi yemuarumondi inoenda zvakakwana nechokoreti.
Ndinovimba unondiudza maonero ako!
1 Chokoreti uye amaretto mousse
Dhokoreti dhizeti mumaminitsi gumi nemashanu.
Nguva yekugadzirira: 1:7 p.m.
Kubika nguva: 8M
Nguva yakazara: 1:15 p.m.
100 g yakasviba chokoreti
2 mazai machena makuru
75 g tsvuku caster shuga
140 g kurova kirimu
Negirazi yakachena uye yakaoma, tinoisa butterfly uye tinodurura machena. Tinovakwira kusvika kune chando panguva Maminitsi maviri anomhanyisa 2 ½.
Kana pane masekondi makumi matatu ekupedzisa nguva, tinowedzera shuga kuburikidza nemuromo nenzira ye cascade.
Pakupera kwenguva, tinobvisa musanganiswa uye chengetedza.
Pasina kushambidza girazi uye ne butterfly, wedzera kirimu uye urove kumhanya 3 ½. Iwe unofanirwa kuchenjerera kuti urege kuicheka.
Kana yaunganidzwa, tinomisa muchina uye tinoibvisa.
Pasina kushambidza girazi, nyungudusa chokoreti panguva Maminetsi mana pa4º nekukurumidza 60.
Kana iyo inotanga kunyunguduka, tinomisa muchina, vhura girazi, todzikisa chocolate chips pamashizha uye kuwedzera amaretto uye ramba uchinyunguduka kusvika pakuguma kwenguva.
Tinobvisa musanganiswa kune ndiro huru.
Isu tinobatanidza iyo Whip cream kuita enveloping movements.
Zvadaro, tinonyatsobatanidza machena akaiswa kusvika kune chando kuitira kuti musanganiswa urege kuderedzwa.
Isu tinoparadzanisa mousse mu5 makapu akanaka kana mbiya duku.
Rega kutonhorera mufiriji kweawa imwe.
Paunenge uchishumira, shongedza nemachokoreti akanaka kana crunchy chocolate balls.
Kugadzira icing shuga, unongofanirwa kuikuya kweminiti imwe nekumhanya 1.
Bvumira anenge maminetsi mashanu kupfuura usati wavhura girazi kuti dzivisa kuzadza kicheni neshuga yehupfu.
Shuga yakasara inogona kuchengetwa muchirongo chegirazi kuti ushandise mune mamwe madhiri.
Kupedzisa kwakanyatsonaka uye zviyo zveshuga hazvizooneki.
Mamwe mashoko - Chiedza sitirobhu furo
Tsvaga mamwe mabikirwo e: Nyore, Asingasviki 1/2 awa, Desserts
Yakazara nzira kuchinyorwa: thermorecipes » Thermomix mapepa » Desserts » Chokoreti uye amaretto mousse
Handina kumbobvira ndashinga nemousse, asi ndichiona kutaridzika kwako, uye kuti wakashongedza zvakanaka sei, ndichafanirwa kusvika pairi! Nenzira, wakatenga kupi iwo iwo chokoreti akashongedzwa manhamba ???
Ndinokukurudzira kuti ugadzirire iyi recipe nekuti ndeimwe yezvinhu zvakapusa zvawakamboona!
Ini ndagadzira iyo yekushongedza chokoreti ine chokoreti yekuchinjisa sheet. Ivo vanozivikanwa zvakare sekuchinjisa uye vakaita sevana vanonamira. Ivo vanongoiswa pamusoro petiroko inopisa, vanobvumidzwa kutonhorera, uye kubviswa. Ino inguva yekutanga yekuzviita uye, chokwadi, inogona kuvandudzwa ... asi yakanaka kwazvo !!
Ini ndinofunga iresipi yakanaka kwazvo, usakahadzika kuti ndichaiyedza. Chandinoda kuziva ndipo pandingawana iwo manhamba echokoreti awakashongedza mousse, kana kuti kana iwe wakavaita kuti vaone kana uchigona kutsanangura kuti sei. Ndatenda.
Ah! Ini ndakakanganwa kukubvunza iwe kana caster shuga yakaita senge icing shuga asi ine brown brown.
Caster shuga ndiyo shuga yepasi yatinoita neThermomix. Inogona kuve caster ye chena shuga kana caster ye brown shuga.
Caster uye glas zvinotaridzika zvakafanana nekuti ese ari maviri akaonda asi haagone kutsiva mumwe nemumwe.
Nezve izvo zvekushongedza, ndakaudza Jessie nezvazvo. Iko kuchinjirwa kwechokoreti.
Inofanira kunge iri huru
vakapindwa muropa ... uye zviri nyore kwazvo !!
Kunze kwemubvunzo waAnna nezve mhando yeshuga, ndine mumwe mubvunzo. Unogona here kushandisa kirimu yakarohwa yavanotengesa mumidziyo?
Iwe unoreva izvo zvidhori izvo zvaunofanirwa kuzunza kunge pfapfaidzo? Handidi kuishandisa nekuti iyo mhando yekirimu inouya nekukurumidza.
Ini ndinokukurudzira kuti uzviite nenzira ine mari kwazvo, inova nekutenga pasuru yekurova kirimu, uchisiya mufriji kusvikira kwanyanya uye kuirova pamwe neThermomix ... mune isingasviki 1 miniti iwe wakasimudza uye yakasungirirwa zvakanaka !!
Chekutanga pane zvese, maita basa nemabikirwo enyu, asi ini ndoda kukubvunzai mubvunzo, chiiko Amaretto?
Mhoro Maria Jesu:
Amaretto idhakwa reItari rinosvika makumi maviri neshanu, riine flavour pakati pevanilla, maamondi nemaapurikoti. Tinogona kuiwana muzvitoro zvese, kunyanya iyo Disaronno brand, kunyangwe paine akati wandei mabhurandi.
Panzvimbo peAmaretto, ndinogona here kushandisa imwe doro?
Ehe unogona kutsiva amaretto neimwe doro. Edza whiskey, rima ramu kana chiteshi ... asi ipapo zvaisazove chokoreti uye amaretto mousse !! ; P
Lucia Garcia Solis akadaro
Ndinoda kuziva chinonzi amaretto uye kana uchikwanisa kushandura mabikirwo erimwe doro.Ndatenda
Pindura lucia garcia solis
Ndinokuudza zvakafanana naPepi. Iwe unogona kubvisa amaretto kana kutsiva iyo ne whiskey, nhema ramu, chiteshi ...
Ndatenda zvikuru nekuda kwemaresipi ako, iwo akanaka!
Ndekupi kuendeswa kwekushongedza kwakatengwa? Ini ndinofunga makeke anokunda zvakanyanya nekushongedza!
Ini ndinobvumirana zvachose newe, kushongedzwa kunoita kuti ndiro dziwedzere kunakidza.
Shanduko dzinotengwa mune yakasarudzika chokoreti, keke kana gourmet zvitoro.
Ini ndinoda aya madiki chokoreti makapu! Ndine shungu nezvese chandinopfeka choco! Kutsvoda
Iniwo ndiri fan yechokoreti uye ndinogona kukuudza kuti mousse yabuda. Haisi yakakamira uye ine tambo… .ummmm !!
mabhora ekushongedza kwaunovatengera chimwe chinhu chinoitika kana ndikasaisa chero doro ndinokutendai makorokoto …………………….
Mabhora akakosha, asi chero chinhu chidiki chauinacho kumba chakakosha kushongedza, kunyangwe makutu mashoma echokoreti chena anotaridzika kunge akanaka!
Ukasawedzera doro, unenge uine chinokatyamadza Chocolate Mousse !!
Mumwe mubvunzo mayra unogona kugadzirwa nemukaka chokoreti panzvimbo yesokoreti yakasviba, ini handifarire chokoreti yakasviba, ngatiti,
Ehe, inogona kutsiviwa nemukaka chokoreti. Isa iyo yakaenzana senge yaive nhema uye voila!
Ini ndinoda mutema zvirinani asi ndinozviitawo nekuti iyo yandinoshandisa haina zvachose nzungu uye kuti mumba mangu ndicho chinhu chikuru!
Mhoroi, ndanga ndichida kubvunza iwe chokoreti inova ndiyo yekutsakatika kana chokoreti isina mukaka kuti udye isina kunyangarika ndatenda ………………
Haisi chokoreti inopisa kana chero chinhu chakadai. Iyo chokoreti inofarira kufukidza makeke, iyo kubva kuNestlé brand ine pepa bhuru (sekunge yaizoputira mapakeji) uye inoti Nestlé Desserts. Kune dema nemukaka. Nyanzvi pastry mapheki vanoshandisa mashoma madonhwe kana misodzi, iyo iwe yawakaona zvechokwadi pane blog.
MHORO VASIKANA NDINODA ZVIBIKO ZVENYU, ZVINONYANYA kuti Q NDEZVIDZIDZO, ECHI CHETE CHITATU NDINOGADZIRA ZVIMWE ZVIDZIDZO.
Iwe hauzive kuti tinofara sei pese paunotaura pane chakadai! Isu tinoita chikamu chebasa asi izvi zvese hazvigoneke pasina iwe uye pasina zvaunotaura!… Saka, ndinokutendai zvikuru !!
Ini handizive zvinoreva amaretto, ndinoda mumwe munhu kuti andiudze kuitira kuti ndigadzire recipe inoitora
Kunyangwe ndatove ndataura nezve Amaretto, zvese muresipi uye mune zvakataurwa, ndinokusiira chinongedzo neruzivo rwakazara.
Kutadza zvachose !!!!
Ndinoda mabikirwo ako. Ungave uine chokoreti mousse iyo isingade kurohwa kirimu here? Ini handiwane poindi uye, chero iyo inondicheka, kana ini ndinogara pfupi kwenguva uye haina muviri. Ndatenda
Handikwanise kutenda zvaunondiudza pamusoro pekamurove ... nekukura kwazvo !!
Ichokwadi ndechekuti ini handina chero isina kirimu asi ini ndinotora zano rako sedambudziko uye ndinovimba kuzokwanisa kutsikisa imwe yaunoda munguva pfupi, zvakanaka?
Ndatenda zvikuru nekufarira kwako; Iwe uchiri kugona kundipa rimwe zano kuti udzidze kurova kirimu. Kutsvoda
Ini handisi kukanganwa nzira yako. Asi ini ndaona yako yekupedzisira kutaura uye zvakandishamisa kwazvo nekuti kurova kirimu ndiyo yakapusa!
Zvinhu zvekuchengeta mupfungwa:
1. Kirimu rinogara richitonhora asi risina kugwamba.
2. Isai kubvunda uye kumisa kumhanya 3 1/2.
3. Ramba wakaritarisa kuti risacheke.
4. Kana iwe ukaisa iyo Thermomix girazi mufiriji kwechinguva ichakwira zvakanyanya nekukurumidza.
Haasi ese makirimu akafanana, anofanirwa kuve neinosvika 35% mafuta (mg). Ivo havana kukodzera kirimu yekubika.
Kukwapura kirimu yemuriwo unofanirwa kutevedzera nhanho dzakafanana.
Iwe uchandiudza kana aya matipi akakushandira iwe!
Ini ndakabatwa zvakanyanya pa blog yako. kubva pandakasangana naye handina kumira kuedza maresiphi ako. nezuro ndichitsvaga chokoreti mousse yevanun'una vangu, ndakawana ichi chinoshamisa. Ndakaigadzira nechokoreti fondant uye sezvo vachida chokoreti havana kuda kumirira kwenguva refu, ndakaiisa mufiriji uye chii chakange chiri kushamisika kwedu kunoshamisa… yakashanduka kuita chokoreti inonaka ice cream !!!! Zvinonaka !!! Ndinoikurudzira, inonaka kunge chaiyo chokoreti ice cream.
Ndinoda kuti iwe uedze!
Uye zvakare kuti iwe utaure pane zvaunowana.